Abavelisi boMatshini boMatshini abaMakisha abaMbane beendlela | China Umatshini oMakisha oMatshini weNdlela oMakisha oMatshini kunye nabaXhasi
—Umatshini wokuMakisha eziNdawo ziiNxalenye ——
Umatshini wokutshiza opholileyo weplastiki we-200HS, i-MMA 1: 1, exutywe ngaphakathi
Singabantu umenzi ngobungcali eTshayina kunye nefektri yomatshini abandayo zeplastiki zokutshiza exutywe ngaphakathi. Inkqubo yokunciphisa umothuko ophambili, isixhobo esingashukumiyo semilomo, umbhobho wangaphandle, inkqubo yokupholisa eqhubekayo, Icandelo B isixhobo sokuxuba esisimilo kunye nesixhobo sokucoca ngokukhawuleza, njl.
Umatshini wokuMakisha i-250DC oziPhathwayo
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso woomatshini bokumakisha kwendlela abazihambelayo. Ifanelekile kakhulu kwizikhululo zeenqwelo moya, oomasipala, abaqhubi, okanye nawuphina umntu ofuna amanqaku aphezulu okanye eminye imigca enemibala emibini. Ngaxeshanye ukutshiza imibala emibini kwipateni, imveliso kunye nobhetyebhetye ukumakisha zichazwe kwakhona, kwaye ubuninzi bepateni bufikelela kuma-90 cm.
Isandla sokuTsala umatshini wokuPakisha kwendlela yeCold Plastic-Spotline
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso we ……
Uhlobo lokuqhuba umatshini wokumakisha wendlela obandayo weplastiki-ye-Spotline
I-LXD yamacandelo amabini okuMakisha uMatshini
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wamacandelo amabini okumakisha indlela. Inezikhongozeli ezibini zepeyinti A kunye namanqaku B, anokuxutywa kunye ngokudibanisa isixhobo. isixhobo esivuselelayo sinokuzivuselela ngokuzenzekelayo, exhaswa ngamandla eselfowuni.
Amacandelo amabini oMatshini wokuMakisha endlela
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wamacandelo amabini omatshini wokumakisha kwendlela. Irabha yevili: iivili zentsimbi, iirabha ezixhathisa ubushushu, ivili langemva lomsila lixhotyiswe ngesikhundla, ukuyenza ihambe kumgca othe tye. Uqwalaselo oluphambili: Iyunithi yokuqhuba yokuhamba eyi-1-i-USA2 i-Solenoid valve-Italy3 Isiguquli somoya-iTaiwan4 imodyuli-eJamani5 Isilinda somoya-e-Itali
I-200HS iNkqubo yeCandelo lokuCoca iNdlela
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso wamacandelo amabini oomatshini bokutshiza. Uqwalaselo oluphambili: impompo kabini, inkqubo yokuqhuba injini ye-hydraulic, inkqubo yokuhambisa eqhubekayo.
Umatshini wokuPhawula kweNdlela oMabini kwiFlat Line, iProfayili Line kunye neAgglomerate Line
Singumvelisi omkhulu wase China kunye nomzi mveliso kumatshini wokumakisha wendlela wamacandelo amabini omgca osicaba. Irabha yerabha: ivili yentsimbi, iirabha ezinganyangekiyo ezenziwe ngobushushu, ivili langemva lomsila libonelelwe nge-locator, gcina umatshini usiya kumgca othe ngqo.
Iinkuphelostencils Kwisakhelo Ezimbini Icandelo Chela Machine
Singumvelisi omkhulu ngobuchwephesha wase China kunye nomzi mveliso weelori-ezifakwe kumatshini wokutshiza wamacandelo amabini. Inkqubo ye-RoadLazer ye-RoadPak yinkqubo yemigca ye-hydraulic eyakhelwe ikhontraktha yobuchule bendlela. Ngenkqubo ye-RoadPak yokuqhekeza ngaphandle komoya, ungafezekisa imigca echanekileyo kakhulu kwizantya ezivelisa kakhulu ukuya kuthi ga kwi-10 mph (16 km / h).